गलबन्दीमा गीतमा बेहुला बेहुलीको उत्कृष्ट डान्स ! (भिडियो सहित) » लोक संगीत पारखी
गलबन्दीमा गीतमा बेहुला बेहुलीको उत्कृष्ट डान्स ! (भिडियो सहित)
२१ असार २०७६, शनिबार ००:०९
काठमाडौं / पछिल्लो समय जातीयताका कुराको बहस सामाजिक संजाल मार्फत निकैनै चलेको छ । करोडौ दर्शक स्रोताले अत्याधिक रुचाईएको गित बिबादमा तानिएका प्रकाश सपुत र शम्भु राईको बिषयले थप बिबाद तानिएको पनि थियो। गलबन्दी गीत बजारमा आएको छोटो समयमै यसको चर्चा र बिबाद उस्तै रहयो गीत मिलेको बिषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा गरिएको आरोप प्रत्यारोप संगै जातीय विभेदको बिषयलाई लिएर मिडियामा गलफल्ती चलेको छ ।
तर अहिले गएर प्रकाश सपुत र शम्भु राईको यस बिबाद बिषय टुंगिएको जानकारी पनि आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली लोक गीत क्षेत्रमा एकछत्र राज गरेको प्रकाश सपूतको गीत गलबन्दी गीतलाई लिएर अहिले देश बिदेशमा चर्चा चलिरहेको छ ।
दर्शकहरुले तीजमा यो गीत हेर्नुभएन भने पछुताउनुहुने छ,आज सम्मकै उत्कृष्ट विषयमा आमाबाको पिडा बोकेको ग...
बालापन ले बनायो दश लाख दर्शक
ऋृतु दंगाल आमा बोलको गीतले भाबुक बनायो दर्शक लाई…(भिडियो सहित)
काउली बुढिलाई कसले बनायो दर्शक रुवाउन दवाब…(भिडियि सहित)
किशोर ले मेक्सम खाती र देबी घर्ती लाई पागल बनाएपछि…(भिडियो सहित)
छाता न भएपछि यसरी भिजे शिशिर र अञ्जली…(भडियो)
खुट्टैमा निल परे पनि राजु,अर्जुन र देवी तीजमा सारिका सँग यसरी नाच्ने
टिकटकमा पनि हिट गलबन्दी जोडी ( भिडियो )